MAAREYNTA WALBAHAARKA | Maalmahanews
June 14, 2017 - Written by Maxamed Sulayman
Wax kasta oo sababa kacsanaan, fikir badan, murugo, khalkhal iyo deggenaansho-xumi xagga jirka ama maskaxda ah, waxa ay noqonayaan walbahaar.
Haddaba, haddii aad walbahaarsan tahay niyadda ku haay in aadan keli ku aheyn, waxa uu la-dersaa 70 boqolkiiba dadka dunida ku nool, waana qeyb ka mid ah nolosha caadiga ah.
Waxaa la arkaa in heerka walaaca ee ku soo wajahay uu ku jajuubo, deetana aadan awoodin inaad maareyso.
Maxaa keena walbahaarka?
Waxaa sababa nafta oo aan awood u yeelan in ay sameyso wax ay doonaysay, markaa dhiigga ayaa sare u kaca, waxayna saameyn ku dhacaysaa qalbiga, xaaladdaa iyada ah waxaad doonaysaa inaad degdeg ugu dhaqaaqdo arrin aadan ka fiirsan.
Ogaanshaha iyo barashada walbahaarka ka hor waxaa iyana muhiim ah inaad adigu is-taqaan, qofka aad tahay, dabcigaaga, akhlaaqdaada iyo xusuustaada, waayo waxay kaa caawinaysaa inaad ogaato murugada ku saameyn karta inta ay la eg tahay iyo sidii aad ula falgeli laheyd.
Maareynta walbahaarku waa maamulidda naftaada, dareenkaaga, aragtidaada iyo inaad xukunto kana awood roon tahay la-dhaqanka mashaakilka ku soo food saara, yoolka koowaad ee hiigsimaadka leh waa nolol ka dheellatiran xag walba sida; xiriirka qoyska, asxaabta, shaqada, ama waqtiyada kuu gaarka ah ee aad ku howlan tahay wajahidda horumarkaaga, nasiinadaada, IWM.
1. U samee wax kasta raalli-gelinta Alle, kuna samee wax kasta sunnaha Nebi Muxammad (NNKH).
2. Sameyso jadwal nolol maalmeed, oo sharraxaya qofka aad tahay, ujeeddada aad ka leedahey nolosha iyo halka aad hiigsaneyso.
3. Ha yareysan awoodda maskaxeed ee aad leedahey, isla markaana tirtira dib u dhac kasta oo ku beegsan kara.
4. Ka dhigo saaxiibkaaga koowaad qoraal akhriska, kuna dedaal daraasaynta culuumta kala duwan.
5. Ka qeybgal xalaqaadka diiniga ah iyo goobaha aqoon-kororsiga si aad u dhisto garaadkaaga.
6. Ha ahaado risqiga aad quudato mid xalaal ah, haba yaraado maalkuye, lana soco in faqiirku Jannada ka hor gelayo qaniga.
7. Dabool irrid kasta oo walbahaar sababi karta, una gudub maalin walba baal cusub ee horumar leh, adigoo ka gudbaya kuwii horay u keenayay walbahaarka.
Maxaa ii daran si aan uga fogaado walbahaarka?
Cabidda sigaarka: Sigaarka waxaa u dhinta malaayiin dad ah sanadkiiba, wuxuu lid ku yahay xasilka jirka, xitaa haddii aad jeceshahay dhuuqiddiisa, waxa uu u daran yahay caafimaadkaaga.
Hurdada badan: hadduu jirku jiifo in ka badan xadkii loogu talagalay, wuu baarixayaa, wuxuuna dareemayaa caajis iyo jajabni, waxaa tegaya degganaantii iyo xusuustii caadiga aheyd.
Booqo saaxiib: waxaa la yiri: “Waxaad qarsato way ku qurunsadaan” haddii fikirkaagu bato raadi saaxiib aad ku kalsoon tahay una sheeg dareenkaaga, waqti ku bixi wadajirkiinna, isku day inaad waayo waayo ka sheekaysataan, waxaa kuu ifi doona talooyin tayo leh, laakiin saaxiibkaagu waa inuu ahaado saaxiib wanaagsan ee kugu gargaara raallin-gelinta Eebbe.
Naftaada u sheekeey: adduunyadu waa dhibaato socota, adigu awood uma lihid inaad xalliso dhibaatadaa, sidaa darteed, waxaa roon inaad ka badbaaddo oo qura, istaag meel bannaan ah, cirka eeg adoo caadi iska dhigaya, neefso oo qaado hawada, is waydii maxaa ku walaacinaya? ma qaddar Alle ayaa diidma leh!.
Jimicsi iyo ciyaar: jir ciyaar kama weynaado, caqlina cilmi kama weynaado, ciyaar ha tuman cilmina ha baran waa cibaaro adduun!“Jimicsi ayaa jir kaaba, jiifaa jirro ah”“Jir waa jimicsi jirrana waa jiif” dhaqdhaqaaqa dhiigga ayaa ah farxadda jirka, sababtoo ah, waxaa uu dhiig daray ah (fresh) dhex marayaa xididdada welwelsan iyo kuwa fiyoow.
Nasiino iyo hurdo: hadduu jirku shaqeeyo muddo dheer wuxuu dareemayaa daal iyo dhacsaal, waqtiga ceynkaa ah, haddii ay shaqadu kugu badan tahay, waa inaad heshaa fasax aad ku nasato, cilmi baaris caafimaad ayaa ku talinaysa in uu qofku helo hurdo ugu yaraan siddeed saac habeenkii, Alle naxariistiisa waxaa ka mid ah in habeenkii la nasto maalintiina la shaqeeyo. Sidoo kale ha moogaanin inaad qaadato cuntooyin wanaagsan.
W.Q: Maxamed Cilmi Dhicisow